बारम्बार किन बढ्दैछ पेट्रोलको भाउ ? निगमले देखायो य’स्तो कारण : – Sadhaiko Khabar
बारम्बार किन बढ्दैछ पेट्रोलको भाउ ? निगमले देखायो य’स्तो कारण :
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ०४, २०७८ समय: ९:००:४७
काठमाडाैं/ को’भिड महा’मारीमा नेपाल आयल निगमले आइतबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । पेट्रोलको मूल्य लिटरको १२३ रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य १०६ रुपैयाँ पुगेको छ । महामारीमा जनतालाई राहत दिनुपर्ने बेला मूल्य बढाएको भन्दै निगमको आलो’चना भएको छ ।
तर, नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले भने अन्तराष्ट्रिय बजारमै बढेकाले यहाँ पनि मूल्य बढाउनुपरेको त’र्क गरे । निगमको कारण भन्दापनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र करको कारण महँगो भएको उनको भनाइ छ ।
मूल्य महँगो भएकाले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको कर समायोजन हुनुपर्ने सरोकारवालाको जो’ड रहेको छ । यो खबर आज’को नागरिक दैनि’कमा छापि’एको छ ।